हार्दिक बधाई ,चर्चित हास्यसिरियल कि कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन् ! – Hamro24News
July 7, 2021 adminLeaveaComment on हार्दिक बधाई ,चर्चित हास्यसिरियल कि कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन् !
हार्दिक बधाई ,चर्चित हास्यसिरियल कि कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनिन् ! भद्रगोल, सक्किगोनी, लगायतका चर्चित सिरियलकी कलाकार रक्षा श्रेष्ठ आमा बनेकि छन् । छोरालाई जन्मदिएपछि रक्षा र उनका पति खुशीले फुरुगं रहेका छन् ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
सुत्केरी भए पनि रक्षाले छिट्टै फेरी सक्किगोनीमा अभिनय गर्ने समेत जनाएकि छन् । हास्य टेलिसिरियल ‘भद्रगोल’बाट चर्चामा आएकी श्रेष्ठ बिबाह भएको लामो समयपछि आमा बन्न लागेको कुरा एक युट्युब च्यानलबाट बाहिरिएको थियाे ।
एक युट्युव च्यानलसँको कुराकानीमा ‘भद्रगोल’ टिमले यसबारे खुलासा गरेको थियाे । कुराकानीमा रक्षा गर्भवती भएका कारण उनी अब छिट्टै पुनः प्रशारण हुन लागेको ‘सक्किगो नि’ मा नदेखिने सम्भावना रहेको बताइएको छ । भद्रगोलबाट चर्चामा आएकी रक्षाले १ सयभन्दा बढी म्युजिक भिडियो तथा ६० भन्दा बढी विज्ञापनमा अभिनय गरेकी छिन् ।
याे पनि, एकैपटक जन्मेका तिम्ल्याहा दिदीबहिनी याेजना बिना कसरी भए त एकैपटक गर्भवती !जुम्ल्याहाको जीवनमा धेरै कुराहरुमा समानता हुन्छ तर, क्यालिफोर्नियाका एकैपटक जन्मिएका तिम्ल्याहा दिदीबहिनीको जीवनमा भने यस्तो समय पनि आएको छ जुन सामान्यतया अरु जुम्ल्याहाहरुको जीवनमा नहुन सक्छ ।
यी तीनैजना दिदीबहिनी एकैपटक गर्भवती भएका छन् । यी तीन दिदीबहिनीले केही समयको अन्तरालमा पालैपालो सन्तान जन्माउनेछन् । अहिले यी तीन दिदीबहिनी आफ्नो गर्भावस्थाका अनुभवहरु साझा गरिरहेका छन् । यी तीन दिदीबहिनीहरु गिना, निना र भिक्टोरिया हुन् । ३५ वषृका यी दिदीबहिनी एकैपटक गर्भवती भएका छन् । यो कुरालाई लिएर यी तीनैजना दिदीबहिनी निकै उत्साहित छन् ।
उनीहरुले आफ्ना बच्चाहरुमा पनि आफूहरुमा जस्तै प्रेम होस् भन्ने चाहन्छन् । दक्षिणी क्यालिफोर्नियाका यी दिदीबहिनी मध्येकी कान्छी भिक्टोरियाले फक्स न्यूजसँग कुरा गर्दै आफूहरु एकैपटक गर्भवती हुनु सपना वास्तविकता भएजस्तै भएको बताइन् ।
चितवनमा यो के हुदैँछ ? फेरि हराइन् अर्की युवती